Xabiibo Xasan oo geeryootay
Xabiibo Xasan Axmed Xaydar oo ah gabar Shan jir ah oo ay isha buru uga tiil ayaa maalintii shaley ahayd ku geeryootay Magaalada Muqdisho kaddib markii Ishu ay keentay Dhiigbax.
Aabbaheed Xasan Axmed Xaydar ayaa u mahadceliyey intii damacsaneyd in ay gabadhaasi caafimaad ahaan la tacaalaan, waxa uuna Illaah kaga baryey in uu bedel khayr qaba siiyo.
Sidoo kale adeerkeed C/waaxid Axmed Xaydar ayaa isna u mahadceliyey intii dooneysay inay gabadhaasi u gargaaraan, waxa uuna illaah uga baryey in uu ajir iyo xasanaad ugu bedelo.
Amiin Yuusuf Khasaaro oo gabadhaan xaaladeeda la socday ayaa u xaqiijinaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in Xabiibo Xasan ay geeryootay, waxa uuna u soo jeedinayaa sidoo kale Web-Site horey warbixinteeda loo galshay inay la socdaan in ay Xabiibo Xasan Geeryootay.
Xabiibo Xasan Cali oo ah Gabar 5- jir ah oo la dhibaatoon Cudur ka heleelay Isha Bidix ayaa maalintii shalay ahayd Deeq lacageed soo gaarsiiyey C/rashiid Cali Guutaale oo degan Dalka Norway. Deeqdaan lagu soo hagaajiyey Jibriil Max’ed ayaa waxa ay ka Koobneyd 800-Doolar ayaa waxaa laga Gudoonsiiyey Aabaheed Xasan Axmed Xeydar waxaana goobjoog ka ahaa Adeerkeed C/waaxid Axmed.
C/rashiid Cali Guutaale ayaa markii la gudoonsiinaayey la soo xiriiray Qoyska Gabdha oo u rajeeyey in ay Gabadhooda u helaan Caafimaad deg-deg ah isagoo sheegay inuu dadaal u gali doono sidii Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway ay u caawini la haayeen Gabadhaasi.
Xabiibo Xasan oo marba marka ka dambeysa sii liidanaysa ayaa waxaa loogu baaqayaa Dadka soomaaliyeed ee ku nool Dalka gudihiisa iyo dibadiisa inay Gabdhaasi ay gacan siiyaan si ay u hesho Qaliin deg-deg ah cidii dooneysa in ay u gargaarto hala soo xiriiraan.
Gabar lagu magacaabo Xabiiba Xasan Axmed oo da'deedu tahay shan jir degan magaalada Muqdisho ayaa xaaladeeda caafimaad aad u liida kadib markii ay isha bidix kaga soo baxday buro aad weyn, tiiyoo saddexdii habeen ee ugu dambeysay ay gabadhaasi dareemeysay xanuun hor leh oo ka soo wajahay isha kale ee midig.Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Holland ayaa soo gaarsiiyay markii ugu horeysay deeq lacageed oo gaareysa 150-Doollar, waxaana qoyska gabadha soo gaarsiiyay Weriye C/llaahi Axmed Xasan (Sheekhaalow) oo ka mid ah weriyeyaasha Idaacadda Radio Banaadir, iyadoo aabaha gabadha Xasan Axmed uu u mahad celiyay Jaaliyadda Soomaalida Holland.
Xubnaha ka tirsan Jaaliyadda Soomalida Holland gaar ahaan Magaalada ZWOLLA oo Deeqdaas lacageedsoo gaarsiiyey waxay magacyadoodu kala yihiin: Aamina, Naadiya, Kheyrto, Maryan, Maryan Ruun, Maxamed Cali iyo Yaasiin Cali, hase yeeshee kharashkaasi ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu taakuleeyo gabadhaasi dhibanaha ah oo u baahan Qaliin Deg deg ah .
Dhinaca kale Gabar lagu magacaabo Aamina Maxamed oo degan dalka Mareykanka ayaa Xabiibo Xasan soo gaarsiisay deeq lacageed oo gaareysa $50 oo doolar , waxaana deeqdaasi lacageed guddoonsiiyay isla markaana wakiil ka ahaa Weriye Amiin Yuusuf Khasaaro oo gabadhaasi xanuunsan aabaheed guddoonsiiyay, wuxuuna Aabaha gabadha uu ka mahad celiyay deeqdaasi. Cidii Gar gaar u fidineysa ha kala soo xiriireen.
Xaawo waa gabar hal il wax ka aragta, Maskaxdeedu joogto, Firfircon, Raashinka si caadi ah u qaadaneysa, waxayna Burada isha uga soo baxday culeyskeedu keenay in ay xamili kari weyso, hase yeeshee gabadhaasi dhiban, caafimaad-keeda kale aad ayuu u wanaagsan yahay, isha kalana aad ayey u caafimaad qabtaa sida uu sheegay Aabbaheed. Balse Marka ay la cayaareyso Caruurta kale waa ka cararaan.